Fumanisa eyona postcards yedijithali efanelekileyo yeKrisimesi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJudit Murcia | | Izibonelelo, itemplates
Enye ye amasiko Eyona intle yeKrisimesi, kwaye esiphulukene nayo nokuhamba kwexesha amakhadi okubulisa IKrismesi.
Las ubuchwepheshe obutsha Senze ukuziqhelanisa nexesha esiphila kulo. Siyakholelwa ukuba kufuneka ube nengqondo evulekileyo kwaye uthathe zonke iindlela onokukhetha kuzo. Kwi-Intanethi siza kufumana amathuba angenasiphelo okumangalisa abantu esibathandayo. Nangona asifanele sikhuphe ngaphandle iiposikhadi ngesandla, enokuthi ibe yinto elungileyo nangona beya kuthi bacinge ukuba utyalo mali ngaphezu kwe ixesha. Kwimeko nayiphi na into, kule post Siza kubona uluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo Yonke incasa.
1 Iiposikhadi zedijithali
4 Iiapps zokuvuyisana neKrisimesi ngeselula
6 Amakhadi eSitampu esiBomvu
7 Iikrismesi zeapps zokusebenza
8 Iiposikhadi zoopopayi
11 Amakhadi kaNico
El Ifomathi yedijithali Enye yezona ndlela zisetyenzisiweyo kwiminyaka yakutshanje. Okuqhelekileyo umfanekiso wosapho ngoku ithunyelwe ngu whatsapp sikhatshwa sisicatshulwa esifutshane ukuvuyisana neeholide zeKrisimesi. Sinezinye iindlela zedijithali zokudala imibuliso yethu yeKrisimesi enobuchule ngakumbi kunabanye abafowunelwa.
Siza kukubonisa ezinye izicelo kunye neewebhusayithi ukwenza eyakho Imibuliso yeKrismesi ngokulula nangokugqibeleleyo simahla.
Ukuba sizinikele kuyilo, olona khetho lucacileyo kukusebenzisa inkqubo yokuhlela ingcali efana neFotohop okanye i-Illustrator. Nangona kunjalo, kuya kufuneka siqiniseke ulwazi y buchule ekungekho kuthi sonke esinayo. Sukuba nexhala, kuba zikhona abahleli beefoto ezikwi-intanethi ngaphandle kokuba simahla kakhulu lula yokusebenzisa. Sele benazo zonke izinto zeKrisimesi ukuze sikwazi ukwenza ikhadi leKrisimesi ngendlela esiyithandayo.
Umzekelo wokuqala esikuzisela wona ngu Fotor, Umhleli womfanekiso osivumela ukuba:
Yenza i collageOko kukuthi, yenza ukwakheka kweefoto ezahlukeneyo.
Uyilo ngezixhobo ezahlukeneyo.
Xa sikwiwebhu, kufuneka siye kukhetha ukhetho "Yenza uyilo"Kwaye phakathi kokukhetha okuza kuvela siza kukhetha"ikhadi”Ukwenza ikhadi lethu leKrisimesi.
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba yiwebhusayithi isiNgesi, ke, zonke Kuya kufuneka senze uphando ngesiNgesi ukufumana iziphumo. Kwicala singongeza izincamathelisi ezi "izitifiketi”. Kule meko, sichwetheze "umntu wekhephu", indoda ekhephu ngeSpanish, kwaye uninzi lweendlela zivele. Sirhuqa uyilo esingasaluthandiyo kwitafile yomsebenzi. Siza kukwazi beka ukuthanda kwethu kwaye simnike ubungakanani kufanelekile.
Xa sinoyilo olugqityiweyo, phezulu kwiwebhu siya kuba nenketho gcina ifayile kwikhompyuter okanye sinako isabelo ngqo kwiwebhu ngokusebenzisa nomphakathi.
Umbethe es isixhobo esikhethekileyo ekwenzeni amakhadi ngazo zonke iintlobo zeminyhadala, iminyhadala okanye amacandelo. Zininzi templates sele yenziwe ukwenza ukuba kube lula kumsebenzisi ukuba ayile eyakhe uyilo.
Xa sikhetha icandelo esifuna ukusebenza kulo, siya kuboniswa iitemplate ezahlukeneyo ezikulungeleyo ukuhlela ngebar esecaleni. Singa yenza ngokwezifiso ngokongeza iifoto zethu kunye neetekisi.
Iiapps zokuvuyisana neKrisimesi ngeselula
Olona khetho lunokwenzeka ukuba asinalo ixesha elininzi yenza ikhadi leposi leKrisimesi ngefowuni yakho. Singayenza ngelixa silinde ibhasi, sisegumbini lokulinda okanye sinexesha lokuzonwabisa. Ukongeza, sinako thumela onke amaqela ethu kuWhatsApp.
Isicelo Justwink Singayisebenzisa ukwenza zonke iintlobo zokuvuyisana. Babo templates yeyantlandlolo, kwaye isinika ithuba lokuba yongeza iaudiyo, Esinika udibaniso olungelulo lonke usetyenziso olunikezelayo. Iyafumaneka iOS y Android.
Amakhadi eSitampu esiBomvu
Esinye isicelo esingaphandle kwesiqhelo. Inefayile ye- iintlobo ngeentlobo zeetemplate esinokuthi sizenze ngokwezifiso zethu. Ukongeza, iyasivumela ukuba sibathumele ngokwamanani ngothungelwano lwentlalo okanye ukhetho lwe ziprinte. Cofa ukuze ukhuphele iOS o Android.
Iikrismesi zeapps zokusebenza
Esi sicelo sahlukile, kodwa besifuna ukusongeza njengoko kunokuba nomdla ngokwenene. Yisicelo esisebenzayo ukuqokelela amabinzana amahle kakhulu eKrisimesi. Bangayifumana itekisi yantlandlolo ukuba bayithumele kumaqela akho e-WhatsApp abahlobo.
Inokuba luncedo ukuba ungomnye wabo bantu uyakwazi ukubhala. Siqinisekile ukuba siphefumlelwe yile ndawo. cofa apha.
Olunye ukhetho endiluthanda ngokwenene zezi iiposikhadi zoopopayi, iividiyo zazo zonke iintlobo ukuvuyisana neKrisimesi ngendlela emnandi ngakumbi. Makhe sibonise ezinye iiwebhu esivumela ukuba sabelane ngeeposikhadi zezi mpawu.
Le webhusayithi isivumela ukuba senze amakhadi eKrisimesi anemibala kakhulu, sinokwenza nawo intshukumo kwaye yongeza umculo kubo. Oko kubenza babe ngamakhadi eposi oqobo kunye noyilo. Nangona ukuba sigcina kakhulu, sinokwenza i- ikhadi leposi eliqhelekileyo. Inyani yile yokuba ikho Yonke incasa.
Inoluhlu olubanzi kakhulu lweeposikhadi zoopopayi. Icala elisezantsi kuphela esilibeka kule ndawo kukuba ayikuvumeli ukuba uzenze ngokwezifiso, kuba oopopayi sele bedaliwe. cofa apha kwaye jonga kuzo zonke iindlela onokukhetha kuzo.
Lo iphepha izakuvumela ukuba wenze ikhadi lokuposa elihlekisayo apho abalinganiswa abaphambili baya kuba nguwe. Kufuneka beka ubuso bakho kwaye nabani na ofuna emzimbeni weelves. I-elves idanisa ngexesha levidiyo, ngale ndlela, kuya kubonakala ngathi uyadanisa ukuvuyisana neeholide. Yibane ukuchukumisa uburharha ilungele ukufumana uncumo kuye nakubani na omthumelayo. Ngaba kunjalo kulula ukuyisebenzisa. Ungawuthatha umfanekiso ngalo mzuzu ngekhamera yecompyuter, okanye uxhome onayo kwigalari.
En le webhu, unako Yenza amakhadi eposi ekhisimusi ukuzithumela kumfowunelwa ngamnye. Kufuneke u bhalisa kwiziko ledatha lakho ukuze ube nokufikelela kwii-postcards zoopopayi kwaye ungazigcina ukuze uzithumele kamva. Ngokwam, ayisiyiyo eyona webhusayithi ibalaseleyo ngaphandle. Kananjalo abanaso isithembiso esitsala umdla omkhulu.
Njengoko ubonile, i Uluhlu lweenketho lukhulu kwaye sinokukhetha nayiphi na kuzo. Inkqubo ye- isiphumo Kuyakulunga kwaye nabahlobo kunye nosapho lwethu ngokuqinisekileyo baya kuthanda ukufumana umbuliso weKrisimesi. Masingalahli isithethe!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iiposikhadi zedijithali zale Krisimesi